ဘောလုံးလောကမှာ အနားပေးခဲ့တဲ့ အထင်ကရ ကျောနံပါတ်များ (၂)
5 Oct 2018 . 12:07 PM
ကလပ်အသင်း တစ်သင်းအနေနဲ့ ကျောနံပါတ်တစ်ခုကို အနားပေးတယ်ဆိုတာက အသင်းအတွက် နှစ်ပေါင်းများစွာ ပေးဆပ်ခဲ့သူ၊ အသင်းရဲ့ ပုံရိပ်၊ ပရိသတ်အချစ်တော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကစားသမားတစ်ဦးကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ သဘောပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အခုနောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာတော့ ကလပ်အသင်းတွေမှာ ကျောနံပါတ်ကို အနားပေးတဲ့ လုပ်ရပ်တွေ သိပ်မရှိတော့ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သက်ဆိုင်ရာ ကလပ်အသင်းတွေဟာ အသင်းက လူငယ်ကစားသမားတွေအနေနဲ့ အသင်းရဲ့ ဂန္ထ၀င်ကျောနံပါတ်ကို ၀တ်ဆင်ခွင့်ရဖို့ ကြိုးစားအားထုတ်စေချင်တဲ့ သဘော၊ တခြားနာမည်ကြီး ကစားသမားတွေကို ခေါ်ယူခဲ့ရင် ဒီ ဂန္ထ၀င်နံပါတ်ကို ဆက်ခံစေချင်တဲ့ သဘောတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ မန်ယူအသင်းမှာဆိုရင် ကျောနံပါတ်(၇)ကို ဂန္ထ၀င်နံပါတ်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပေမယ့် အနားပေးဖို့ အစီအစဉ် မရှိသလိုပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက် ကလပ်အသင်းတွေ အနားပေးခဲ့တဲ့ အထင်ကရ ကျောနံပါတ်တွေ အကြောင်း အပိုင်း(၁)ကို မနေ့က ဖော်ပြခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ အခု အပိုင်း(၂)ကို ပရိသတ်တွေအတွက် ဆက်လက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဘာရီစီ Baresi (၆- အေစီမီလန်)
ဘောလုံးလောကမှာ ရှားရှားပါးပါး One Club Player စာရင်းဝင် ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဘာရီစီဟာ အေစီမီလန်အသင်းမှာ ၁၉၇၇ ကနေ ၁၉၉၇ ခုနှစ်အထိ နှစ်ပေါင်း(၂၀)ကြာ ကစားခဲ့ပြီး စီးရီးအေဖလား (၆)ကြိမ်၊ ဥရောပဖလား (ချန်ပီယံလိဂ်)(၃)ကြိမ် ရယူခဲ့သူပါ။ နောက်ပြီး အဲဒီတုန်းက လူငယ်ကစားသမားလေး မာလ်ဒီနီ Maldini ကိုလည်း သူ့လို ဂန္ထ၀င်စာရင်းပေါက်အောင် ဦးဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အေစီမီလန်အသင်းဟာ သူတို့ရဲ့ ဂန္ထ၀င်ကြီး ဘာရီစီကို ၂၀ ရာစု အကောင်းဆုံးကစားသမား အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သလို သူ ၀တ်ဆင်ကစားခဲ့တဲ့ ကျောနံပါတ်(၆)ကိုလည်း အနားပေးခဲ့ပါတယ်။
ယိုဟန်ခရိုက် Johan Cruyff (၁၄- အေဂျက်စ်)
ယိုဟန်ခရိုက်ဖ် ဆိုတာက နယ်သာလန် ဘောလုံးလောကမှာသာမကဘဲ ကမ္ဘာ့ဘောလုံးလောကအတွက်ပါ လူတိုင်း လေးစားအားကျရတဲ့ ဂန္ထ၀င်တစ်ဦးပါ။ နယ်သာလန်အသင်း “Total-football” ကစားဟန်နဲ့ ဘောလုံးဇာတ်ခုံပေါ်မှာ တင့်တယ်နေတဲ့အချိန်တုန်းက ယိုဟန်ခရိုက်ဖ်ဟာ အကောင်းဆုံး အသုံးတော်ခံခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ အသက်(၁၀)နှစ်အရွယ်ကတည်းက အေဂျက်စ်လူငယ်အသင်းကို စတင်ခြေချခဲ့ပြီး စီနီယာအသင်းနဲ့အတူ ဥရောပဖလား (ချန်ပီယံလိဂ်) (၃)ကြိမ်အပါအ၀င် ဆုဖလား အများကြီး ရယူနိုင်ခဲ့တယ်။ အေဂျက်စ်အသင်း ကစားသမားဘ၀မှာသာမက နည်းပြဘ၀မှာပါ အောင်မြင်မှု ရယူခဲ့သူဖြစ်ပြီး ယိုဟန်ခရိုက်ဖ်ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ အေဂျက်စ်အသင်းက သူဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ ကျောနံပါတ် (၁၄)ကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ အနားပေးခဲ့တယ်။
ဘက်ဂီယို Roberto Baggio (၁၀- ဘရက်စီယာ)
“Ponytail”ပုံစံ ဆံပင်စတိုင်လ်နဲ့ တစ်ချိန်က ဘောလုံးလောကကို လွှမ်းမိုခဲ့သူ အီတလီဂန္ထ၀င် ဘက်ဂီယိုဟာ အင်တာမီလန်၊ အေစီမီလန်၊ ဂျူဗင်တပ်စ်၊ ဖီအိုရင်တီးနား စတဲ့ စီးရီးအေ ထိပ်သီးအသင်းတွေမှာ ကစားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ ၀တ်ဆင်ခဲ့တဲ့ ကျောနံပါတ်ကို အနားပေးခဲ့တဲ့အသင်းက ဘက်ဂီယိုရဲ့ ဘောလုံးသမားဘ၀ နောက်ဆုံးကလပ်ဖြစ်တဲ့ ဘရက်စီယာအသင်းပါပဲ။ ဘရက်စီယာအသင်းအတွက် ၂၀၀၀ ကနေ ၂၀၀၄ ခုနှစ်အထိ ကစားခဲ့ပြီး ဆုဖလားမရခဲ့ပေမယ့် ဘရက်စီယာပရိသတ်တွေရဲ့ နှလုံးသားကို သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
မာလ်ဒီနီ Paolo Maldini (၃ – အေစီမီလန်)
အေစီမီလန်ရဲ့ နောက်ထပ် ဂန္ထ၀င်နောက်ခံလူ တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူ့စီနီယာ ဘာရီစီလို One Club Player စာရင်းဝင် ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး အေစီမီလန်တစ်သင်းတည်းမှာပဲ ၁၉၈၄ ကနေ ၂၀၀၉ ခုနှစ်အထိ ကစားခဲ့သူပါ။ အေစီမီလန်အသင်းနဲ့အတူ စီးရီးအေ (၇)ကြိမ်၊ ချန်ပီယံလိဂ် (၅)ကြိမ် ရယူခဲ့ပြီး ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်။ အေစီမီလန်အသင်းဟာ မာလ်ဒီနီ ၀တ်ဆင်ခဲ့တဲ့ ကျောနံပါတ်(၃)ကို အနားပေးခဲ့ပေမယ့် တကယ်လို့ သူ့ သားတစ်ဦးဦးသာ အေစီမီလန်အသင်းမှာ ကစားမယ်ဆိုရင် အဲဒီနံပါတ် ၀တ်ဆင်ခွင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိဘောလုံးလောကမှာ အသင်းတစ်သင်းအတွက် နှစ်တွေ အများကြီး ကစားခဲ့သူ၊ အသင်းရဲ့ ဂန္ထ၀င် စာရင်းပေါက်တဲ့အထိ ကစားတဲ့သူဆိုတာ တဖြည်းဖြည်း လက်ချိုးရေလို့ ရနေပါပြီ။ အခုဖော်ပြခဲ့တဲ့ ဂန္ထ၀င်တွေဟာ သက်ဆိုင်ရင် ကလပ်တွေအတွက် ရာနှုန်းပြည့်ပေးဆပ်ခဲ့ကြတဲ့၊ သမိုင်းဝင် အောင်မြင်မှုတွေ ရယူနိုင်ခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပြီး သူတို့ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ ကျောနံပါတ်ကို အနားပေးခဲ့တာက ထိုက်တန်တဲ့ ဂုဏ်ပြုမှုလို့ သတ်မှတ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် . . .
Photo:YouTube,The Independent,Listal1,Corriere dello Sport,AC Milan News
ဘောလုံးလောကမှာ အနားပေးခဲ့တဲ့ အထငျကရ ကြောနံပါတျမြား (၂)
ကလပျအသငျး တဈသငျးအနနေဲ့ ကြောနံပါတျတဈခုကို အနားပေးတယျဆိုတာက အသငျးအတှကျ နှဈပေါငျးမြားစှာ ပေးဆပျခဲ့သူ၊ အသငျးရဲ့ ပုံရိပျ၊ ပရိသတျအခဈြတျောဖွဈခဲ့တဲ့ ကစားသမားတဈဦးကို ဂုဏျပွုတဲ့ သဘောပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ အခုနောကျပိုငျးနှဈတှမှောတော့ ကလပျအသငျးတှမှော ကြောနံပါတျကို အနားပေးတဲ့ လုပျရပျတှေ သိပျမရှိတော့ပါဘူး။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ သကျဆိုငျရာ ကလပျအသငျးတှဟော အသငျးက လူငယျကစားသမားတှအေနနေဲ့ အသငျးရဲ့ ဂန်ထဝငျကြောနံပါတျကို ဝတျဆငျခှငျ့ရဖို့ ကွိုးစားအားထုတျစခေငျြတဲ့ သဘော၊ တခွားနာမညျကွီး ကစားသမားတှကေို ချေါယူခဲ့ရငျ ဒီ ဂန်ထဝငျနံပါတျကို ဆကျခံစခေငျြတဲ့ သဘောတှကွေောငျ့လညျး ဖွဈပါတယျ။ ဥပမာ မနျယူအသငျးမှာဆိုရငျ ကြောနံပါတျ(၇)ကို ဂန်ထဝငျနံပါတျအဖွဈ သတျမှတျထားပမေယျ့ အနားပေးဖို့ အစီအစဉျ မရှိသလိုပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ ဘောလုံးသမိုငျးတဈလြှောကျ ကလပျအသငျးတှေ အနားပေးခဲ့တဲ့ အထငျကရ ကြောနံပါတျတှေ အကွောငျး အပိုငျး(၁)ကို မနကေ့ ဖျောပွခဲ့ပွီးတဲ့နောကျမှာ အခု အပိုငျး(၂)ကို ပရိသတျတှအေတှကျ ဆကျလကျ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
ဘာရီစီ Baresi (၆- အစေီမီလနျ)
ဘောလုံးလောကမှာ ရှားရှားပါးပါး One Club Player စာရငျးဝငျ ကစားသမားတဈဦးဖွဈပါတယျ။ ဘာရီစီဟာ အစေီမီလနျအသငျးမှာ ၁၉၇၇ ကနေ ၁၉၉၇ ခုနှဈအထိ နှဈပေါငျး(၂၀)ကွာ ကစားခဲ့ပွီး စီးရီးအဖေလား (၆)ကွိမျ၊ ဥရောပဖလား (ခနျြပီယံလိဂျ)(၃)ကွိမျ ရယူခဲ့သူပါ။ နောကျပွီး အဲဒီတုနျးက လူငယျကစားသမားလေး မာလျဒီနီ Maldini ကိုလညျး သူ့လို ဂန်ထဝငျစာရငျးပေါကျအောငျ ဦးဆောငျပေးနိုငျခဲ့ပါတယျ။ အစေီမီလနျအသငျးဟာ သူတို့ရဲ့ ဂန်ထဝငျကွီး ဘာရီစီကို ၂၀ ရာစု အကောငျးဆုံးကစားသမား အဖွဈ သတျမှတျခဲ့သလို သူ ဝတျဆငျကစားခဲ့တဲ့ ကြောနံပါတျ(၆)ကိုလညျး အနားပေးခဲ့ပါတယျ။
ယိုဟနျခရိုကျ Johan Cruyff (၁၄- အဂေကျြဈ)
ယိုဟနျခရိုကျဖျ ဆိုတာက နယျသာလနျ ဘောလုံးလောကမှာသာမကဘဲ ကမ်ဘာ့ဘောလုံးလောကအတှကျပါ လူတိုငျး လေးစားအားကရြတဲ့ ဂန်ထဝငျတဈဦးပါ။ နယျသာလနျအသငျး “Total-football” ကစားဟနျနဲ့ ဘောလုံးဇာတျခုံပျေါမှာ တငျ့တယျနတေဲ့အခြိနျတုနျးက ယိုဟနျခရိုကျဖျဟာ အကောငျးဆုံး အသုံးတျောခံခဲ့သူဖွဈပါတယျ။ အသကျ(၁၀)နှဈအရှယျကတညျးက အဂေကျြဈလူငယျအသငျးကို စတငျခွခေခြဲ့ပွီး စီနီယာအသငျးနဲ့အတူ ဥရောပဖလား (ခနျြပီယံလိဂျ) (၃)ကွိမျအပါအဝငျ ဆုဖလား အမြားကွီး ရယူနိုငျခဲ့တယျ။ အဂေကျြဈအသငျး ကစားသမားဘဝမှာသာမက နညျးပွဘဝမှာပါ အောငျမွငျမှု ရယူခဲ့သူဖွဈပွီး ယိုဟနျခရိုကျဖျကို ဂုဏျပွုတဲ့အနနေဲ့ အဂေကျြဈအသငျးက သူဝတျဆငျခဲ့တဲ့ ကြောနံပါတျ (၁၄)ကို ၂၀၀၇ ခုနှဈမှာ အနားပေးခဲ့တယျ။
ဘကျဂီယို Roberto Baggio (၁၀- ဘရကျစီယာ)
“Ponytail”ပုံစံ ဆံပငျစတိုငျလျနဲ့ တဈခြိနျက ဘောလုံးလောကကို လှမျးမိုခဲ့သူ အီတလီဂန်ထဝငျ ဘကျဂီယိုဟာ အငျတာမီလနျ၊ အစေီမီလနျ၊ ဂြူဗငျတပျဈ၊ ဖီအိုရငျတီးနား စတဲ့ စီးရီးအေ ထိပျသီးအသငျးတှမှော ကစားခဲ့သူဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ သူ ဝတျဆငျခဲ့တဲ့ ကြောနံပါတျကို အနားပေးခဲ့တဲ့အသငျးက ဘကျဂီယိုရဲ့ ဘောလုံးသမားဘ၀ နောကျဆုံးကလပျဖွဈတဲ့ ဘရကျစီယာအသငျးပါပဲ။ ဘရကျစီယာအသငျးအတှကျ ၂၀၀၀ ကနေ ၂၀၀၄ ခုနှဈအထိ ကစားခဲ့ပွီး ဆုဖလားမရခဲ့ပမေယျ့ ဘရကျစီယာပရိသတျတှရေဲ့ နှလုံးသားကို သိမျးပိုကျနိုငျခဲ့ပါတယျ။
မာလျဒီနီ Paolo Maldini (၃ – အစေီမီလနျ)
အစေီမီလနျရဲ့ နောကျထပျ ဂန်ထဝငျနောကျခံလူ တဈဦးဖွဈပါတယျ။ သူ့စီနီယာ ဘာရီစီလို One Club Player စာရငျးဝငျ ကစားသမားတဈဦးဖွဈပွီး အစေီမီလနျတဈသငျးတညျးမှာပဲ ၁၉၈၄ ကနေ ၂၀၀၉ ခုနှဈအထိ ကစားခဲ့သူပါ။ အစေီမီလနျအသငျးနဲ့အတူ စီးရီးအေ (၇)ကွိမျ၊ ခနျြပီယံလိဂျ (၅)ကွိမျ ရယူခဲ့ပွီး ကွီးကယျြခမျးနားတဲ့ အောငျမွငျမှုတှေ ပိုငျဆိုငျခဲ့တယျ။ အစေီမီလနျအသငျးဟာ မာလျဒီနီ ဝတျဆငျခဲ့တဲ့ ကြောနံပါတျ(၃)ကို အနားပေးခဲ့ပမေယျ့ တကယျလို့ သူ့ သားတဈဦးဦးသာ အစေီမီလနျအသငျးမှာ ကစားမယျဆိုရငျ အဲဒီနံပါတျ ဝတျဆငျခှငျ့ပေးသှားမှာဖွဈပါတယျ။
လကျရှိဘောလုံးလောကမှာ အသငျးတဈသငျးအတှကျ နှဈတှေ အမြားကွီး ကစားခဲ့သူ၊ အသငျးရဲ့ ဂန်ထဝငျ စာရငျးပေါကျတဲ့အထိ ကစားတဲ့သူဆိုတာ တဖွညျးဖွညျး လကျခြိုးရလေို့ ရနပေါပွီ။ အခုဖျောပွခဲ့တဲ့ ဂန်ထဝငျတှဟော သကျဆိုငျရငျ ကလပျတှအေတှကျ ရာနှုနျးပွညျ့ပေးဆပျခဲ့ကွတဲ့၊ သမိုငျးဝငျ အောငျမွငျမှုတှေ ရယူနိုငျခဲ့ကွသူတှဖွေဈပွီး သူတို့ဝတျဆငျခဲ့တဲ့ ကြောနံပါတျကို အနားပေးခဲ့တာက ထိုကျတနျတဲ့ ဂုဏျပွုမှုလို့ သတျမှတျရမှာပဲဖွဈပါတယျ . . .